लकडाउनबारे विज्ञका तीन मत, के फेरि पूर्ण लकडाउन हुन्छ ? | Public 24Khabar
Home Health लकडाउनबारे विज्ञका तीन मत, के फेरि पूर्ण लकडाउन हुन्छ ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको परामर्शमा जनस्वास्थ्यविज्ञले कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न मुख्य तीन सुझाव दिएका छन् । पहिलो सुझाव छ,कर्फ्युसहितको लकडाउन । दोस्रोमा लकडाउन र तेस्रो आंशिक लकडाउन ।
ओलीले सडकमा मान्छेहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा प्रहरीमा संक्रमण बढी देखा परेको बताएका थिए । ‘प्रहरीलाई किन संक्रमण भएको छ भन्दा उनीहरू सडकमा गएका छन्, संक्रमित मान्छेहरूसँग उनीहरूले डिल गर्नु परेको छ’, उनले भने, ‘अनेक कामहरूमा उनीहरू छन् । त्यस्ता कामहरूबाट उनीहरू संक्रमितहरू भइराखेका छन् । ड्युटीको क्रममा संक्रमित भइराखेका छन् । रेस्क्यु गर्न जाँदा संक्रमित भएर आएका छन ।’
Previous articleफेरि दुई साता लकडाउन गर्न विज्ञको सुझाव, प्रधानमन्त्री सकारात्मक
Next articleभारतमा ३ करोड बराबरको नगद र गरगहना चोरी गरेर नेपाली दम्पती फरार,